Xog: Maraykanka oo dhex dhexaadinaya Hogaamiye ka tirsanaa Alshabaab iyo Dawladda Somalia. – Hornafrik Media Network
Washington- Warbaahinta Maraykanka ayaa soo warisay in Wadaxaajood Qarsoodiya uu u socdo Hogaamiye Sare oo ka tirsanaa Alshabaab oo Washington ay ka saartay Liiska Argagixisadda iyo Dawladda Somalia si uu isugu soo dhiibo Muqdisho, iyadoo Wadahadaladana ay door ka ciyaarayso Dawladda maraykanka.
Wakaaladda Wararka AP ayaa daabacday Usbuucii la soo dhaafay in Maamulka Trump uu joojiyay Lacag Abaal Marin ah oo dhamayd $5 Milyan oo lagu bixinayay Macluumaadka la xiriira Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur.
Rooboow waxaa laga saaray Liiska Dadka loogu doonista badan yahay “most wanted list” ee lala xiriiriyo Falalka Argagixisadda ee ay soo saarto Waaxda Arrimaha Dibadda Maraykanka, laguna bixiyo Abaal Marin Cadaaladeed, sida ay Sheegtay Dawladda Maraykanka.
Saraakiisha Warkan laga soo xigtay oo aan la shaacin Magacooda, sababo la xiriira iyagoo aan oggolaansho u haysan inay la hadlaan Warbaahinta ayaa sheegay in lagala tashaday Dawladda in laga saaro Liiska Argagixisadda Mukhtaar Rooboow, mase jirto Faah Faahin intaas ka badan oo ay bixiyeen.
Mukhtaar Rooboow ayeey saarnayd Xayiraadda Maraykanka tan iyo 2008-dii, kadib markii loo aqoonsaday inuu xubin ka yahay Argagixisadda Caalamiga ah. Laakiin Abaal Marinta lagu doon doonayay ma noqon mid sii jirta waqti dheer.
Rooboow waxay Dawladda Maraykanka u aqoonsatay inuu ahaa Afhayeenka Alshabaab, Hogaamiye Ciidan, iyo Hogaamiye Ruuxi ah oo qorsheeyay, isla markaana fuliyay Weeraro dhimasho badan sababay oo lagu qaaday Ciidamadda Dawladda Somalia iyo Hawlgalka Nabad Illaalinta Midowga Afrika ee Somalia.
Ka saarista Liiska Argagixisadda ee Rooboow waxay daba socotaa Wadahadalo billow ah oo u socda isaga iyo Dawladda Somalia. kadib markii uu Kooxda Alshabaab ka saaray Hogaamiyahoodii la dilay Axmad Godane. Waxaana tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu Godane cayriyay uu ku dhuumaalaysanayay Deegaanadda ay Qabiilkiisu ku badan yihiin, isagoo isaga baxsaday Deegaanadii ay kooxdu maamulaysay si uu uga badbaado inay dilaan Maleeshiyaad taabacsan Axmad Godan, kuwaasoo horay u Khaarajiyay Saraakiil Sar Sare oo Kooxda ka tirsanaa oo ay Afkaar ahaan isaga hor yimaadeen Godane sida Dagaalamihii Maraykanka ahaa ee Omar Hammami iyo Ibrahim Afghani oo ahaa Ninka 2aad ee ugu sareeyay Kooxda.
Rooboow oo Da’ ahaan lagu qiyaaso inuu ku dhex jiro Sanno 50-aad waxa uu ahaa Hogaamiyayaasha ugu Khibradda badan Alshabaab, isagoo tagay u safray Afghanistan, halkaas oo uu tababaro kula soo qaatay Dagaalamayaal Alqaacidda ah Sanadkii 2000.
Al-Shabab waxay noqdeen Sannadkii hore Kooxda Xagjirka ah ee ugu dhiig daadista badan Qaaradda Afrika, iyagoo dilay in ka bdan 4,200 oo Qof Sanadkii tagay ee 2016-ka, sida laga soo xigtay Xarunta Africa ee Daraasaadka Istaraatiijiyadda ee Fadhigeedu yahay Washington.
Kooxda Mayalka Adag ee Alshabaab waxay ku dhawaaqday Dagaalo hor leh, kadib markii dhawaan ay iclaamisay Dawladda Somalia Weeraro Milatari oo ka dhan ah. Waxay sidoo kale Kooxdu wajahday Culays Milatari oo kaga imaanaya Washington, kadib markii Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump oo ansixiyay in la balaariyo Hawlagaladda ay Ciidamadiisu ka hayaan Somalia oo ay ku jiraan Duqaymo Cirka ah, iyadoona Wali ay Kooxdu ka taliso qaybo ka mida Goboladda Dalka Somalia.
President Farmajo Calls Somaliland to Maintain Union Amid Calls for Talks Resumption